Umgaqo-nkqubo wabucala | Uhlobo Rave
Lo mgaqo-nkqubo wabucala uqokelelwe ukunceda abasebenzisi abachaphazeleka abachaphazelekayo ngendlela ulwazi lwabo 'oluchanekileyo' (PII) olusetyenziswa kwi-intanethi. I-PII, njengoko isetyenziswa kumthetho wabucala wase-US kunye nokhuseleko lolwazi, lulwazi olunokusetyenziswa ngokwakho okanye kolunye ulwazi ukuchonga, ukuqhakamshelana, okanye ukufumana umntu othile, okanye ukuchaza umntu othile ngokomxholo. Nceda ufunde umgaqo-nkqubo wethu wabucala ngononophelo ukuze ufumane ukuqonda okucacileyo malunga nendlela esiyiqokelela, siyisebenzisa, siyikhusele okanye ngenye indlela isingathe iPII yakho ngokuhambelana newebhusayithi yethu.
Ziziphi iinkcukacha zobuqu esiziqokelela kubantu abavakashela iblogi yethu, iwebhusayithi okanye insiza?
Xa usenza iodolo okanye ubhalisa kwindawo yethu, njengoko kufanelekile, unokucelwa ukuba ufake igama lakho, idilesi ye-imeyile okanye ezinye iinkcukacha zokukunceda ngamava akho.
Siqokelela nini ulwazi?
Siqokelela ulwazi kuwe xa ubhalisa kwileta yeendaba okanye xa ufaka ulwazi kwindawo yethu.
Sisebenzisa njani ulwazi lwakho?
Singasebenzisa ulwazi esiqokelela kuwe xa ubhalisa, uthenge, ubhalisele i-newsletter yethu, uphendule uphando okanye ukuthengiselana, ukhangele iwebhsayithi okanye usebenzise ezinye iinkalo zewebhu ngale ndlela zilandelayo:
• Ukwenza amava omsebenzisi buqu kunye nokusivumela ukuba sizise uhlobo lomxholo kunye nemveliso yemveliso oyithandayo kakhulu.
Ukuthumela ii-imeyile ngamaxesha ngamaxesha malunga ne-odolo yakho okanye ezinye iimveliso kunye neenkonzo.
Silukhusela njani ulwazi lendwendwe?
Iwebhsayithi yethu ilandwa rhoqo kwiindawo ezikhuselekileyo kunye nobuthathaka obuyaziwayo ukwenzela ukuba wenze uhambo lwakho kwindawo ekhuselekileyo kunokwenzeka.
Sisebenzisa rhoqo i-Malware Scanning.
Asisebenzisi isatifikethi se-SSL
• Sinikezela kuphela amanqaku kunye nolwazi, asikaze sibuze ulwazi lomntu kunye nolwangasese njengeedilesi ze-imeyile, okanye iinombolo zekhadi letyala.
Ngaba sisebenzisa 'ikhukhi'?
Ewe. Iikhukhi ziifayile ezincinci ukuba isayithi okanye umniki-wesevisi wakhe uthumela kwi-computer yakho yinkqubo ekhuni kwi-Web browser (ukuba uvumelekile) eyenza iisayithi okanye isibonelelo seenkonzo zibone isiqulathi sakho kwaye sithinte kwaye ukhumbule ulwazi oluthile. Ngokomzekelo, sisebenzisa iikhukhi ukusinceda sikhumbule kwaye senze izinto kwiinqwelo zakho zokuthenga. Ziye zisetyenziselwe ukusiqonda ukukhetha kwakho ngokusekelwe kumsebenzi wangaphambili wangoku okanye we-site, okwenza sikwazi ukukunika iinkonzo eziphuculweyo. Sisebenzisa kwakhona ii-cookies ukusinceda ukuba siqokelele ulwazi olubanzi malunga nesayithi yezithuthi kunye nokusebenzisana kwendawo ukuze sikwazi ukubonelela ngamaziko angcono nakwii-toolkit kwixesha elizayo.
Sisebenzisa iikhukhi kwi:
• Ukuqonda kunye nokugcina okuthandwa ngumsebenzisi kutyelelo lwexa elizayo.
• Gcina umkhondo wentengiso.
• Qokelela idatha edibanisa malunga nokugcwala kwesiza kunye nokunxibelelana kwesiza ukuze unikezele ngamava angcono esiza kunye nezixhobo kwixesha elizayo. Sinokusebenzisa iinkonzo ezithembakeleyo zomntu wesithathu ezilandelela olu lwazi egameni lethu.
Unokukhetha ukuba ikhompyuter yakho ikulumkise rhoqo xa kuthunyelwa ikuki, okanye unokukhetha ukucima zonke ii-cookies. Ukwenza oku ngesikhangeli sakho (njenge-Internet Explorer) yesethingi. Ibhrawuza nganye yahluke kancinane, jonga kwimenyu yokuNcedo yokukhangela ukuze ufunde indlela echanekileyo yokuguqula ikuki yakho.
Ukuba ukhubaza iicokies ngaphandle, ezinye iimpawu ziya kukhubazeka Ayizukuchaphazela amava abasebenzisi enza ukuba indawo yakho isebenze ngakumbi kwaye ezinye zeenkonzo zethu aziyi kusebenza kakuhle.
Nangona kunjalo, usenokubeka iiodolo.
Ukuchazwa kweQela lesithathu
Asithengisi, athengisi, okanye kungenjalo sidlulisele kwamanye amaqela ulwazi lwakho oluchaziweyo.
Iimfuno zopapasho zeGoogle zingabonakaliswa yii-Google Advertising Principles. Zibekwe endaweni yokubonelela ngamava amahle kubasebenzisi. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Sisebenzisa Ubhengezo beGoogle AdSense kwiwebhusayithi yethu.
UGoogle, njengomthengisi wesithathu, usebenzisa iicookies ukukhangela iintengiso kwindawo yethu. Ukusetyenziswa kukaGoogle kwicookie ye-DART kuyenza ukuba isebenzise iintengiso kubasebenzisi bethu ngokuya kutyelelo lwethu kwindawo yethu nakwezinye iisayithi kwi-Intanethi. Abasebenzisi banokuphuma ekusebenzeni kwicookie ye-DART ngokundwendwela umgaqo-nkqubo wabucala weGoogle kunye nomgaqo-nkqubo wabucala wokhuseleko.
Sisebenzise oku kulandelayo:
• Ukuthengisa kwakhona ngeGoogle AdSense
Thina kunye nabathengisi benkampani yangaphandle, njenge-Google sebenzisa i-cookies yokuqala ye-cookies (njenge-cookieskie ye-Google Analytics) kunye ne-cookie-party cookie (okanye i-cookie ye-DoubleClick) kunye nezinye izihlomelo zenkampani yesithathu ndawonye ukuqokelela idatha malunga nokusebenzisana komsebenzisi kunye iimpawu zokubhengezwa, kunye neminye imisebenzi yemisebenzi yesikhangiso njengoko ihambelana newebsite yethu.
Abasebenzisi bangakwazi ukusetha ukhetho malunga nendlela i-Google ikukhangisa ngayo usebenzisa i-Google Ad Izicwangciso zeZilungiselelo. Ngaphandle koko, unako ukuphuma ngokutyelela iNkqubo yokuThengiswa kweNethwekhi ukuphuma kwikhasi okanye ukusetyenziswa ngokusisigxina usebenzisa i-Google Analytics Opt Out Out browser.
California Umthetho wokuKhuselwa kwabucala kweKhompyutha
I-CalOPPA ingumthetho wokuqala wesizwe kwisizwe ukufuna iiwebhusayithi zorhwebo kunye neenkonzo ze-Intanethi ukuthumela ipolisi yabucala. Ukufikelela komthetho kufikelela ngaphaya kweCalifornia kufuna umntu okanye inkampani e-United States (kwaye ngokufihlakeleyo kwihlabathi) eqhuba iiwebhusayithi eziqokelela ulwazi oluqondakalayo kubathengi baseCalifornia ukuthumela umgaqo-nkqubo wabucala obonakalayo kwiwebhusayithi yakhe ochaza ngqo ulwazi oluqokelelweyo kunye nezo abantu ekwabelwana nabo, kunye nokuthobela lo mgaqo-nkqubo. -Bona okungakumbi kwi: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Ngokwe-CalOPPA siyavuma koku kulandelayo:
Abasebenzisi banokundwendwela indawo yethu ngokungaziwa
Nje ukuba lo mgaqo-nkqubo wabucala wenziwe, siya kongeza ikhonkco kuyo kwiphepha lasekhaya, okanye njengobuncinci kwiphepha lokuqala elibalulekileyo emva kokungena kwiwebhusayithi yethu.
Ikhonkco lethu loMgaqo-nkqubo wabucala libandakanya igama elithi 'Ubumfihlo', kwaye linokufumaneka ngokulula kwiphepha elichazwe apha ngasentla.
Abasebenzisi baya kwaziswa malunga naluphi na utshintsho lwemigaqo-nkqubo yabucala:
• Kwiphepha lethu lemfihlo labucala
Abasebenzisi bayakwazi ukutshintsha ulwazi lwabo:
• Ngokuthumela i-imeyile
Indawo yethu yokusingatha ayilandeleli njani imiqondiso?
Siyabulela ukungalandeli imiqondiso kwaye asilandeli, sisebenzela ikuki, okanye sisebenzise intengiso xa kusenziwa umatshini wesikhangeli we-Do Not Track (DNT).
Ngaba indawo yethu ivumela ukulandelwa kokuziphatha kweqela lesithathu?
Kubalulekile nokuba uqaphele ukuba sivumela umkhondo wesithathu ngokuziphatha
I-COPPA (I-Children Protection Act Protection Act)
Xa kuziwa kwingqokelela yolwazi lomntu kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13, umthetho wokhuselo lwabucala wabantwana kwi-Intanethi (i-COPPA) ubeka abazali kulawulo. Ikhomishini yoRhwebo ye-Federal, iarhente yokhuselo lwabathengi yesizwe, inyanzelisa uMgaqo we-COPPA, ocacisa oko kwenziwa ngabasebenza kwiiwebhusayithi kunye neenkonzo ze-Intanethi ekufuneka bekwenzile ukukhusela ubumfihlo babantwana kunye nokhuseleko kwi-intanethi.
Asithengisi ngokuthe ngqo kubantwana abaphantsi kwe13.
I-Principal Fair Information Practices ibeka umgca wecala lobumfihlo eMelika kunye neengcinga ezibandakanya ziye zadlala indima ebalulekileyo ekuphuhlisweni kwemithetho yokukhusela idatha emhlabeni wonke. Ukuqonda iMigaqo-nkqubo yeNkcazo yoLwazi kunye nendlela ekufuneka iphunyezwe ngayo kubaluleke kakhulu ukuthobela imithetho eyahlukeneyo eyimfihlo ekhusela ulwazi lomntu.
Ukuze uhambelane neZiko loLwazi oluLungileyo siya kuthatha inyathelo elilandelayo lokuphendula, xa kufuneka ukuphulwa kwedatha:
Siya kwazisa abasebenzisi nge-imeyile
Kwiintsuku ezisi-7 zomsebenzi
Siya kwazisa abasebenzisi ngesaziso sendawo
Sikwavuma nomgaqo-siseko wolungiso lomntu ngamnye, ofuna ukuba abantu banelungelo lokulandela amalungelo anyanzelekileyo okuqokelela kubaqokeleli zinkcukacha kunye neeprosesa abangakwazanga ukuthobela umthetho. Lo mthetho-siseko awufuni kuphela ukuba abantu babe namalungelo anyanzelisiweyo ngokuchasene nabasebenzisi bedatha, kodwa kwanokuba abantu babenokubuyela ezinkundleni okanye kwiarhente karhulumente yokuphanda kunye / okanye ukutshutshisa ukungathotyelwa kwemithetho ngabaphethe idatha.
UMthetho we-CAN-SPAM ngumthetho obeka imigaqo ye-imeyile yezorhwebo, ubeka iimfuno zomyalezo wezorhwebo, unikezela abafumana ilungelo lokuba ne-imeyile beke ukuba bathunyelwe kubo, kwaye bathetha izigwebo ezinzima ngenxa yokuphulwa.
Siqokelela idilesi yakho ye-imeyile ukuze:
Ukuhambelana ne-CANSPAM siyavuma koku kulandelayo:
Ukuba ngaba naluphi na ixesha unqwenela ukuzibhalisa ekufumaneni ii-imeyile ezizayo, ungasithumela nge-imeyile
kwaye siya kukususa ngokukhawuleza kuyo yonke imbalelwano.
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo malunga nale nkqubo yangasese ungasithintana nathi usebenzisa ulwazi olungezantsi.
ENew York, eU.SA
Ulungiswe ngokugqibela kwi-2017-12-05